I-10 Ama-Anabolic Steroid Raws Material | Ama -teroid e-AASraw
Posted on 07 / 18 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Ngokusho kwesisekelo sedatha yeminyaka yethu yokuthengisa ye-4 nemibuzo ehlukahlukene, sifingqe i-10 impahla eyaziwa kakhulu ye-anabolic steroid (AAS) yamalebhu ahlobene, abathengisi kanye namakhasimende.
Sinciphise izinto ezintathu zokugcina ezingavuthiwe zomkhakha. Ukuthola uhlu olugcwele, hlola i-10 ephezulu edumile i-anabolic steroid impahla eluhlaza.
Izinto ezinkulu Zokuthengisa Eziphelele ze-AAS Raws: I-Best Bulk Gain enezindleko Ezingaphansi Ezifakwa Ngaphakathi Kwe-AAS Raws: Izinto ezihamba phambili ze-Oral AAS Raws ezihamba phambili:
I-Testosterone Enathate / Testo E / Test E powder
Isilinganiselwa:★★★★★ I-Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren A powder
Isilinganiselwa:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol powder
Ukuthengisa okungaphezulu kwe-AAS okuluhlaza okuvela kithi
Ama-steroid ayisisekelo futhi aphakanyisiwe kakhulu ajovwe
Okukhiqiza lula kakhulu futhi okungabizi kakhulu okungu-AAS okuluhlaza okotshani
Ama-steroid ahambisanayo futhi amukeleka kakhulu emakethe.
I-Tren eyaziwa kakhulu phakathi kwabasubathi bokusebenza
I-Trenbolone Acetate powder eluhlaza inamandla kune-Trenbolone Enanthate ngenxa ye-Enanthate ester ethatha isisindo esingi esikhungweni.
Iningi labasebenzisi kuqala ukuhamba ne-Trenbolone hormone njalo iTrenbolone Acetate powder eluhlaza.
Amakhasimende ancamela kakhulu inqwaba yomlomo athola ama-steroid
I-Dinandrol ingazuzisa kakhulu ekwakheni mass.
Imiphumela yeDinandrol kulula ukubambelela kuyo uma isetshenzisiwe iyekiwe ngokuqhathaniswa nama-steroid.
Nazi izinto eziphezulu ze-10 ze-Anabolic Steroids ezidumile:
I-Testosterone Enathate i-powder eluhlaza - I-Steroids Ejwayelekile Ebaluleke Kakhulu
Methandrostenolone powder eluhlaza - Ama-Ortero Steroid Akhulu Ejwayelekile
I-Trenbolone Acetate i-powder eluhlaza - AmaSteroids Agcwele Amandla Aphelele
I-Oxandrolone powder eluhlaza - Abesifazane Abasebenzisa kakhulu ama-Oral Steroid
I-Stanozolol i-powder eluhlaza - Abaziwa kakhulu Lean Gain Oral Steroids
IHormone Yokukhula Komuntu - I-Peptide Ethandwa Kakhulu
I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza - Ama-steroid amaningi angaphansi kwe-Undellated
I-Boldenone Undecylenate ketshezi olungavuthiwe - Ama-steroid amaningi asebenza isikhathi eside kakhulu
I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza - Ama-steroid amaningi kakhulu we-Most
I-Methenolone Enanthate powder eluhlaza - Ama-steroid ama-steroid amaningi
Ukuqonda Izinhlobo ezahlukahlukene ze-Anabolic Steroids
Kunemibalo embalwa ebalulekile okufanele uyibheke lapho ukhetha i-Anabolic Steroids. Kumalebhu, imikhiqizo ethandwayo idinga ukwenziwa ngamathebulethi noma amaphilisi. Okokusebenza kuzoba yi-mixer, iphilisi yokucinezela, isethi ye-capule, umshini we-cap, njll. Imishini enjalo ibiza kakhulu kodwa izosiza ekwakheni imikhiqizo yakho futhi ithole ibhizinisi lesikhathi eside.
I-Oxandrolone (Anavar) i-powder eluhlaza
I-Stanozolol (Winstrol / winny) i-powder eluhlaza
Methandrostenolone (Dianabol) powder eluhlaza
I-Cytomel / T3
I-testosterone undecanoate / Andriol
IClostebol Acetate / 4-Chlorotestosterone acetate / Turinabol (Tbol)
I-Mestanolone / Methyl dht
I-Methasteron / Superdrol
Iningi lochungechunge lweTestosterone
Iningi leqoqo le-Boldenone
I-Methenolone / Primo Enanthate
I-1-Testosterone base / DHB
Abapheki bezindlu be-do-it-ngokwakho (i-DIY) bangcono ukuqala kusuka ekutshaleni kalula ama-steroid, ngamaphoyinti amancane ancibilikisiwe nama-solvents abonakala kakhulu namafutha ophethe. Ama-steroid anconyiwe angatholakala njengoba engezansi:
I-Nandrolone Decanoate (DECA) i-powder eluhlaza
I-Nandrolone phenylpropionate / NPP powder
I-Trenbolone Enanthate powder
I-Trenbolone Acetate i-powder eluhlaza
I-Boldenone Undecylenate / I-Equipoise liquid eluhlaza
I-Drostanolone / Masteron Enanthate powder
I-Drostanolone / Masteron Propionate powder
I-Teststeorne Enanthate i-powder eluhlaza Methandrostenolone powder eluhlaza I-Trenbolone Acetate i-powder eluhlaza I-Oxandrolone powder eluhlaza I-Stanozolol i-powder eluhlaza Ukukhula KwamaHlomu Abantu I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza I-Boldenone Undecylenate ketshezi olungavuthiwe I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza I-Methenolone Enanthate powder eluhlaza
I-1. I-Testosterone Enanthate i-powder eluhlaza
I-Testosterone Enanthate i-powder eluhlaza yi-testosterone emsulwa ene-ester ende esebenza kancane enamathiselwe futhi iyi-testosterone yokuthandwa okuphezulu. Njengenguqulo yePropionate, ingenye yezindlela ezivame kakhulu ezisetshenziselwa umhlaba wonke ngokwenza abathuthukisi bakwazi ukusebenza. Ngokuqondene nezici ezisebenzayo ze-Testosterone Enanthate, imiphumela efanayo eqondile ngokujwayelekile izotholwa ngokuqhathaniswa nenguqulo yePropionate yokuthathwa kwemithi iyafana.
I-testosterone ene-ester ende esebenza kancane
Izinhlobo ezivame kakhulu ezisetshenziswe umhlaba wonke ngokwenza ngcono abasubathi
I-2. Methandrostenolone powder eluhlaza
I-Methandrostenolone i-powder eluhlaza imele enye ethandwa kakhulu futhi enye yama-anabolic steroid abaluleke kunazo zonke isikhathi. Ngaphandle kokungabaza, le yi-steroid yomlomo eyaziwa kakhulu eyake yafika emakethe nangelinye lama-steroid athandwa kakhulu kunoma yiluphi uhlobo. Ngenkathi cishe ihlala itholakala njengethebhulethi yomlomo, i-Methandrostenolone powder eluhlaza ingatholakala njengesixazululo, kepha amaphilisi amele umzila wokuphatha oyinhloko.
Ama-anabolic steroid abaluleke kunazo zonke
I-steroid yomlomo eyaziwa kakhulu eyake yangena emakethe
Ama-steroid anconywe kakhulu ngu-Arnold
I-3. I-Trenbolone Acetate powder eluhlaza
I-acetate ester iyi-ester emfushane kakhulu enamathiselwe kumolekyuli yaseFinaplix. Inempilo esebenzayo yezinsuku ze-2-3 kepha ukugcina amazinga wegazi e-trenbolone ephakanyisiwe futhi eqinile, imijovo yansuku zonke ivame ukutuswa. I-acetate ester ihlinzeka ukusakazwa okusheshayo nokuphezulu kwe-hormone okuwusizo kulabo abafuna izinzuzo ezisheshayo, kuhlanganiswe nesikhathi sokucacisa okusheshayo okungukuthi i-acetate ester ingavalwa ekuqaleni kwemiphumela emibi.
I-ester emfishane kakhulu yeTrenbolone
Imijovo yansuku zonke ivame ukutuswa
Okuzuzisa kakhulu kulabo abafuna inzuzo esheshayo
I-4. I-Oxandrolone powder eluhlaza
I-Anavar imele enye yama-anabolic steroid athandwa kakhulu esikhathi sonke, futhi lokhu kungenxa yemvelo yayo evunyelwe kahle. Le ngenye yama-anabolic steroid ambalwa angasetshenziswa ngabesilisa nabesifazane ngokuphepha, futhi ingenye yemiphumela emibi kakhulu enobungane. Kodwa-ke, kweminye imibuthano i-Anavar yaziswa kakhulu ngenxa yemvelo yayo emnene, kepha lokhu ngokuvamile kubangelwa ukulindelwa okungenangqondo.
Ama-anabolic steroids athandwa kakhulu asendulo
Kakhulu ngenxa yemvelo yayo evunyelwe kahle
Ama-anabolic steroid ambalwa angasetshenziswa ngokuphepha ngabesilisa nabesifazane
Yaziswa kakhulu ngenxa yemvelo yayo emnene
I-5. I-Stanozolol powder eluhlaza
Ngenkathi enye yama-anabolic steroid eyaziwa kakhulu, i-Stanozolol powder eluhlaza ithandwa kakhulu phakathi kwabaningi ku-steroid esebenzisa inani labantu. Kungezindlela eziningi i-anabolic steroid enobumnene engasetshenziswa ngokuphepha ngabesilisa nabesifazane. Ngokubaluleke kakhulu, kubonakale kusebenza kakhulu kwimisebenzi eminingi yokuqinisa ukusebenza.
Ama-anabolic steroid aziwa kakhulu
Okudumile phakathi kwabaningi ku-steroid besebenzisa inani labantu
I-anabolic steroid engasetshenziswa ngokuphepha ngabesilisa nabesifazane
Isebenza ngempumelelo ephezulu yemisebenzi yokuqinisa ukusebenza
I-6. IHormone Yokukhula Komuntu
IHormone Yokukhula Komuntu yi-hormone yamaprotheni ekhiqizwa i-anterior pituitary gland. Ikhiqizwa yibo bonke abantu abaphilayo, futhi isezingeni layo eliphakeme ngesikhathi sobuntwana. I-HGH imele elinye lamahomoni abaluleke kakhulu emzimbeni womuntu njengoba lithinta amathambo ethu, izicubu zamathambo nezitho zangaphakathi, kanye nokudlala izindima kwezinye izindawo eziningi emzimbeni.
Amaphrotheni ama-protein akhiqizwa i-anterior pituitary gland
Okudume kakhulu ku-steroid usebenzisa inani labantu
Ama-hormone abaluleke kakhulu emzimbeni womuntu
I-7. I-Nandrolone Decanoate powder eluhlaza
I-Nandrolone Decanoate i-powder eluhlaza ingenye yama-anabologi asetshenziswa kakhulu phakathi kwabadlali abasathuthukisa ukusebenza. Kuyaziwa ngokuba yi-steroid enkulu enzuzisa kakhulu isizini, kepha futhi iyintandokazi emibuthanweni eminingi yabasubathi ngezinzuzo zayo zokwelapha. Ngenxa yezinzuzo zayo zokwelapha ezinkulu, i-hormone yaseNandrolone ingenye yezinzuzo ezisebenziseka kakhulu ze-anabolic kwezomkhuba wezokwelapha
Ama-anabolic steroid asetshenziswa kakhulu phakathi kwabasubathi abathuthukisa ukusebenza
Waziwa kakhulu ngokuba yisiza esikhulu se-off-isizini esikhulu
Enye yama-anabolic steroid ezuzisa kakhulu kwezokwelapha
I-8. I-Boldenone Undecylenate ketshezi olungavuthiwe
I-Boldenone Undecylenate eluhlaza eluhlaza i-testosterone ethathwe nge-anabolic androgenic steroid futhi iyindlela eguqulwe ngokuhlelekile ye-testosterone. Ushintsho oluncane kakhulu esibophweni esengeziwe esengeziwe esikhungweni sekhabhoni kanye nezikhundla ezimbili. I-Undecylenate ester ivumela ukukhishwa okuphezulu kweBoldenone cishe izinsuku ezingama-3-4 emva komjovo, ngokukhipha kancane okuqhubekayo kwehormoni okufanele ikulandele cishe izinsuku ze-21.
Ingxenye enhle kakhulu yale steroid amandla ayo ukuhlinzeka ngamandla omzimba
Umkhulu wawo wonke ama-anabolic steroid
Enye yama-steroid athembeke kakhulu ngabasubathi abangochwepheshe nabakhi bomzimba
I-9. I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza
Iningi labo bonke i-Masteron emakethe izoba yiDrostanolone Propionate powder eluhlaza. I-Drostanolone Propionate powder eluhlaza yi-dihydrotestosterone (DHT) eyenziwe nge-anabolic steroid. Ngokukhethekile, i-Masteron yi-hormone ye-DHT eye yaguqulwa ngokuhlelekile ngokufakwa kweqembu le-methyl endaweni yokuma kwekhabhoni 2, Lokhu kuvikela i-hormone ekuqhekekeni komzimba yi-3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, etholakala emgodleni wamathambo. Iphinde iyikhulise kakhulu imvelo ye-anabolic ye-hormone.
I-ester eyedlula zonke yeDrostanolone esetshenziswa ngabasubathi abangochwepheshe nabakhi bomzimba
I-androgenic exotic kunazo zonke
Enye yezinto ezidumile phakathi kwalabo bantu abancintisanayo noma abafuna iphisikhi yokuhlobisa ngokwengeziwe
I-10. I-Methenolone Enanthate powder eluhlaza
I-Methenolone Enanthate i-powder eluhlaza ibhekwa njengenye yama-anabolic steroid aphephile emakethe futhi ithwala isilinganiso esihle sokuphepha ukubuyisa lesi simangalo. Eqinisweni, le steroid isetshenziswe ngempumelelo ekwelapheni izingane ezingaphansi komzimba kanye nezinsana ngaphambi kwesikhathi. Kubuye kubekelwe i-osteoporosis ne-sarcopenia.
Ezisetshenziswa kakhulu ngesikhathi sokusika imijikelezo, lapho kutholakala inzuzo enkulu yesisindo
Isidakamizwa esisebenza isikhathi eside
I-anabolic steroid yomlomo ehlukile kancane uma uyiqhathanisa nama-anabolic steroid amaningi womlomo
Genius AAS Raw umthombo ongabhekwa ngaphambi kokuthenga
Uma kukhulunywa ngezinto ezingavuthiwe zokwenziwa kwe-steroid, abaningi banaka ngokushesha ukukhiqizwa okukhona eChina. Kulapha lapho izinto zokusetshenziswa zokwenziwa kwe-anabolic zithunyelwa kwamanye amazwe. Izinto ezingavuthiwe zama-steroid ezivela eChina zithandwa ngezizathu eziningi:
EChina kunekhwalithi ephezulu.
Ukuhambisana nawo wonke amazinga.
Ukuba khona kwezimvume zokukhiqiza nokuthengisa.
Amandla kagesi emvelo nawangempela, angavele asetshenziselwe ukukhiqizwa.
Iphuzu lokugcina labakhiqizi abaningi bama-steroid libaluleke kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kuyindlela elula kunazo zonke thenga izinto zokusetshenziswa zama-steroid ezivela eChina. Kunezinkampani eziningi ezibandakanyeka ekuthengiseni lapha, futhi asikho isidingo sokuhlinzeka ngemibhalo eyengeziwe yokuthenga izimpahla. Lokhu akusho ukuthi eChina ungathenga izinto zokwenziwa zokukhiqiza ekhaya. Cha, kukhona amafektri amakhulu nezinkampani ezithengisa izinto zenzelwe abakhiqizi kuphela. Ukuthenga it imvume eyanele yokukhiqiza nezitifiketi eziningana zekhwalithi.
Ezinye izinkampani zidinga amadokhumenti angeziwe, ngakho-ke ngaphambi kokuthenga i-powder yokwenza ama-steroid, kungcono ukuxhumana nenkampani ubuze ukuthi yimiphi imibhalo edingekayo kuyo. Kungemva kwalokhu kuphela, izinto ezingavuthiwe zama-steroid ezivela eChina zingathengwa futhi zilethwe ezweni lapho ukwenziwa kwamalungiselelo we-anabolic ne-androgenic steroid.
Kepha, ngamalebula angaphansi komhlaba (i-ugl) noma eyomuntu uqobo, akunakwenzeka kuwe ukuthi unikeze noma yimiphi incwadi noma incwadi yokungenisa esemthethweni ngenhloso enjalo yebhizinisi, kunemithombo ezungeze imakethe ukufanisa naleso sidingo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthenga kwakho okunguhlaza okufunayo, zama ukuthola okulungile nobungqabavu, ukuze uzivikele kwabangamanga.
Ama-Anabolic Steroids Raw Purchasing FAQs
I-1. Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yomkhiqizo ngaphambi kokufaka ama-oda?
A: COA, HPLC, HNMR ayatholakala.
B: Amaphepha wokuhlola anamalebhu wesithathu azonikezwa isikhathi nesikhathi.
I-2.Ungaqinisekisa kanjani ukuthi imali yakho iphephile?
Yonke i-oda le-powder yethu eluhlaza ingabuyiselwa imali ngaphambi kokuthi kuthunyelwe izimpahla.
I-3.Ungaqinisekisa ukutholakala kokuhlinzekwa?
I-4.Ungaqala kanjani ama-oda futhi wenze izinkokhelo?
Izinzuzo ezivela kuma-Anabolic Steroids Raw material
Awekho amagiya angaphansi kokutholakala kwamanye ama-labs angaphansi komhlaba, lapho uzokhiqiza khona.
Izindleko eziphansi zomjikelezo wakho ukuze usebenzise amagiya akho aphulwayo. Ngisho nomuntu onemali elinganiselwe angafeza iphupho lokwakha umzimba.
Ukuthengisa kabusha impahla eluhlaza ye-AAS ukuze ibe yisigwili
Ukwakha uhlobo lwakho lomkhiqizo nokuba yinto ethile kulo mbuthano
Ukwenza ucwaningo ngokusetshenziswa futhi usize abanye.
DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin) Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Kwakha Imisipha? Isibuyekezo Sarm [2019 NEW]